Black Magic: မေမြတ်မွန် ကွာရှင်း
Posted by Black Magic | Posted in သတင်းများ | Posted on 4:54 AM
Facebook မှာသီချင်းတွေဆိုရင်း နံမည်ကြီးလာတဲ့ Online အဆိုတော် မေမြတ်မွန်တစ်ယောက် နိုင်ဝင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ကလက်ထပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ ယနေ့ကွာရှင်းလိုက်ပြီလို့ သူမရဲ့ စာမျက်နာမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။ သူမရဲ့ Facebook မှာ.......
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကျွန်မကိုမရယ်ကြပါနဲ့ ဒီနေ့ ကျွန်မရဲ့ ဒုတိယခင်ပွန်း နဲ့ကွာရှင်းလိုက်ပါပြီ.....
Hey all my friends, Don't laugh at me, Today I divorced my second husband. Seems like no husband can handle me, my attitude and my hobby. I tried too hard to get happy life with Anthony but maybe I am too much for him. I am not upsetting, I am just wondering who can I hang out with another day...?.လို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းသာမှန်ခဲ့ရင်တော့ မေမြတ်မွန်တစ်ယေက် လက်ထပ်ပြီး ၂လမပြည့်ခင် ခင်ပွန်းနဲ့ကွာရှင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။